Redox OS yakagamuchira rutsigiro kubva kune iyo pkgar package maneja | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veRedox inoshanda system vakafumura munguva pfupi yapfuura iyo yavakaunza iyo nyowani package package pkgar, iyo inoshandiswa mukati meiyo system.
Kune avo vasingazive nezve Redox izvo inzira yekushandisa , que Chinonyanya kukoshesa ndechekuti kukura kwayo kuri kushandisa mutauro weRust uye pfungwa ye microkernel uko iko chete kudyidzana pakati pezviitwa uye manejimendi manejimendi kunopihwa padanho rekernel uye mamwe ese mashandiro anoendeswa kumaraibhurari ayo anogona kushandiswa neese ari maviri kernel nevashandisi vamiririri.
Sechikamu cheprojekiti, fomati nyowani yepakeji iri kuvandudzwa, raibhurari ine mapakeji manejimendi mashandiro uye yekuraira turu turu yekugadzira uye kubvisa muunganidzwa wecryptographic yakavhenekerwa mafaera.
Iyo pkgar fomati haina kuitirwa kuti ive yepasi rose uye yakagadziriswa ichitarisa izvo zvakasarudzika zveiyo Redox OS inoshanda sisitimu.
Iyo pasuru maneja inotsigira sosi sosi yedhijitari siginecha uye kutendeka kutarisisa. Checksums inoverengwa uchishandisa blake3 hash basa. Iko cheki mashandiro epkgar inogona kuwanikwa musina kunyatso chengeta iyo package faira, uchingobata chete musoro wechikamu.
Kunyanya pasuru ine musoro wefaira (.pkgar_head) uye faira re data (.pkgar_data). Iyo yakasainwa zvakakwana yakazara packet (.pkgar) inogona kuwanikwa nekungobatanidza iyo musoro wefaira kune iyo data faira.
Iyo faira yemusoro ine yakasarudzika cheki yekumusoro yemusoro uye parameterized zvimiro zvefaira faira, pamwe nesiginicha yedhijitari yekuona iyo packet.
Iyo data faira inosanganisira yakateedzana runyorwa rwese anopihwa mafaera uye madhairekitori mupakeji. Pamberi pechinhu chimwe nechimwe chedata pane chimiro chine metadata, iyo inosanganisira cheki yekutsvaga iyo pachayo, saizi, kodzero dzekuwana, nzira inoenderana yefaira yekumisikidza uye kukanganisa kwematanho echinhu chinotevera che data.
Kana panguva yekuvandudza maitiro mafaera ega haana kuchinja uye checksum machisi, ivo vanobva vasvetuka uye kwete kurodha pasi.
Kuvimbika kwesosi kunogona kuverengerwa nekungowana chete yemusoro faira uye kurongeka kweiyo yakasarudzwa dhata faira nekurongedza chete zvivakwa nemaparameter kubva kune ino faira uye kuve nechokwadi kuti vanowirirana ne checksum yakatariswa mumusoro wefaira.
Zvakananga, iyo data pachayo inogona kuverengerwa mushure mekurodha pasi, uchishandisa checksum yechimiro nemaparamende anotungamira data.
Pakutanga, mapakeji anoreva mukana wekudzokororwa gungano, zvinoreva kuti kugadzira pasuru yeimwe dhairekitori nguva dzose kunotungamira mukuumbwa kwepakeji yakafanana. Mushure mekumisikidza, chete metadata ndiyo inochengetwa pane ino sisitimu, iyo inokwana kuvaka zvakare pasuru kubva kune yakaiswa data (kurongedzwa kwepakeji, cheki, nzira, uye kodzero dzekuwana dzinowanikwa mune metadata).
Zvinangwa zvikuru zve pkgar:
Atomic: zvinyorwa shandisa pese pazvinogoneka otomatiki.
Traffic kuchengetedza: data rinotapuriranwa pamusoro penetiweki chete kana hashi yashanduka (mafaera akagadziridzwa chete anotorwa pasi panguva yekuvandudza)
Kukwidziridzwa kwakawanda nekukurumidza cryptographic algorithms inosanganisirwa (blake3 inotsigira kuenzanirana kwekugadziriswa kwedata kana uchiverenga hash). Kana iyo repository data isati yambochengetwa, hashi inogona kuverengerwa dhata rakadzorwa panguva yebhoti.
Minimalism: Kusiyana nemamwe mafomati, pkgar inosanganisira chete metadata inodiwa kutora pasuru.
Kuisa dhairekitori rusununguko: Chero mushandisi anogona kuisa iyo package mune chero dhairekitori (mushandisi anofanira kuve nekodzero yekunyorera kune yakasarudzwa dhairekitori).
Chengetedzo: mapakeji anogara akaverengerwa nekrisimogirafi uye kuongorora kunoitwa pasati paitwa mashandiro epakeji (musoro unotakurwa kutanga, uye kana siginecha yedhijitari iri yechokwadi, data rinoendeswa kune dhairekitori rechinguva, iro rinotamisirwa kudirector yekuenda mushure mekusimbiswa).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Redox OS yakagamuchira rutsigiro kubva kune iyo pkgar package maneja
Vhura Sosi Foundation yakazivisa vanokunda veMahara Software Mipiro 2019